Uyenza njani uyilo ngeGeomap -Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Uyenza njani uyilo ngeGeomap
Uyenza njani uyilo ngeGeomap
Sizibonile ezi ntlobo zezinye izinto kunye nezinye iinkqubo ezifana GIS asibonise y Microstation, Makhe sibone indlela yokwenza uyilo okanye imephu yokukhupha kunye Geomap.
Ukwenza uyilo, iGeomap ifuna imephu yokudibanisa izinto eziza kumela. Nje ukuba sibe nemephu, iqhosha elithi "Yongeza ubeko" liyasebenza kwibar yesixhobo.
Iitemplate ze2 ziyafumaneka ukuqalisa ukuyila imephu.
Itemplate ye1. Imephu enentsomi
Itemplate ye2. Imephu ngaphandle kwentsomi
Xa ukhetha itemplate oyifunayo, itabhu entsha ebizwa ngokuba ngu "Beka" yenziwa ecaleni kwemephu kwaye amaqhosha akuvumela ukuba uhlengahlengise kwaye uhambise imbonakalo yemephu yenziwe kwi-toolbar.
Ithebhu Yobeko inoluhlu lwamaqhosha kunye nezixhobo zokumisa kunye nokuhlela izinto ezahlukeneyo ezinokuba yinxalenye yomboniso. Iphepha lobeko limele iphepha ekwenziwe ngalo imephu.
Izixhobo ezenziwa nguGeomap ziyafumaneka kwezi ziboniswe kule bar ilandelayo:
Kuyacetyiswa ukuba iqale inkqubo yokudala ukwakhiwa kwemephu ngokuchaza iphepha kunye nobungakanani bayo; khumbula ukuba kwimephu yedijithali, isikali sikwisayizi yephepha esiya kuprinta kuba yonke into isetyenzisiwe kwi1: isikali se1. Izixhobo ezikulo mfanekiso ulandelayo zivumela ukuba sibeke ubungakanani kunye nokuqhelaniswa kwephepha apho kupapashwa khona kuya kuprintwa.
Kwimo enikelwe itemplate ekhethiweyo (Imephu enentsomi), izinto ezahlukeneyo sele zifakiwe: imephu yefestile, imbali, isikali sebali,… Ukongeza kwezo sele zikhankanyiwe, ezinye izinto zinokufakwa njengoku: isihloko, ilogo, imigca , njl.
Ibhokisi yencoko yababini yeempawu zemephu yewindows ibonisa uluhlu lweemephu zonke eziqulathwe kwiprojekthi.
Xa ukhetha imephu, uqhagamshelo lusekwe phakathi koxwebhu lwemephu kunye "nemephu yefestile" into echazwe ekwimaphu.
Unokufikelela kwiimpawu zento ethi "imephu yefestile" ngokucofa kabini kuyo.
Imenyu yokuhla "phantsi kwemephu inoxanduva lokudibanisa okunamandla phakathi kwemephu ehambelana nayo kunye nokumelwa kwayo kwiwindows yemephu.
Ukuba ukhetho "Gcina indawo yangoku yemaphu" lukhethiwe, utshintsho olwenziwe kwimephu (ukusondeza, ukugxalathelana, ukutshintsha kwesikali) kuyakuchaphazela umzobo kwiwindows yemephu.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yemephu imele itafile yemixholo yemephu enxulumene noko. Zizahlulo ezibonakala kuphela kwitafile yemixholo yemixholo evela kwilivo.
Unokufikelela kwiimpawu zento ethi "imephu yeentsomi" ngokucofa kabini kuyo.
Ukuthatha isigqibo ngelenksi kwizinto ezizimeleyo kunokuba yinto enomdla xa ufuna ukwenza ngokwezifiso into nganye eyenzayo.
Ibha yesikali inikezela ngesalathiso semgama kwimephu. Xa usenza into yesikali sebar, inxulunyaniswa nemephu ekhethiweyo.
Emva kokwenza ukwakhiwa kwemephu, unokuyigcina ukuze isetyenziswe xa kusenziwa iimephu ezizayo, inokujongwa kwakhona ukubona ukuba ifanelekile na njengoko ufuna, ukuthumela kwakhona kumshicileli okanye iyelenqe ukwenza ikopi eprintiweyo yemephu okanye ugcine njengemephu. Ifayile yokushicilelwa kamva.
Xa ujonga ukwakhiwa kwemephu, injengalo mfanekiso ulandelayo: